အသိဉာဏ်နည်းတဲ့သူနဲ့ ပြိုင်မငြင်းပါနဲ့ ... - Barnyar Barnyar
အသိဉာဏ်နည်းတဲ့သူနဲ့ ပြိုင်မငြင်းပါနဲ့ ...
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ လူ ၂ယောက် တစ်နေကုန်စကားများ ငြင်းခုန်နေကြတယ်။ တစ်ယောက်က ၈ x ၃ =၂၁ လို့ ပြောတယ်။
နောက်တစ်ယောက်က “မဟုတ်ဘူး မှားနေတယ်။ ၈ x ၃=၂၄ မှ အမှန်” ဆိုပြီး စကားများကြတာ ရွာသူကြီးအိမ် ရောက်လာကြတယ်။
သူကြီးက ဖြစ်စဉ်ကို နားထောင်ပြီး ၂၄ လို့ပြောတဲ့သူကို ကြိမ်ဒဏ် ပေးခိုင်းလိုက်တယ်။ ရိုက်ခံရတဲ့သူက မကျေမနပ်နဲ့ သူကြီးကို ပြန်ပြောတယ်။
သူမမှားဘဲနဲ့ ဘာလို့ ကြိမ်ဒဏ် ပေးခံရသလဲပေါ့။ သူကြီးကပြောတယ် ၈ x ၃ =၂၁ လို့ ပြောတဲ့သူနဲ့ တစ်နေကုန် ငြင်းခုန်ပြီး စကားများနိုင်ရအောင် မင်းလောက် အသိဉာဏ် မရှိတဲ့သူကို အပြစ်မပေးရင် ဘယ်သူ့ကို အပြစ်ပေးရမလဲ ဆိုပြီး ပြောပာတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ဒီလိုလူတွေနဲ့ အမြဲ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
လျှာအရိုးမရှိတိုင်း ပေါက်တတ်ကရတွေ ပြောပြီး သူထင်ရာပဲ အမြဲမှန်တယ်လို့ ထင်နေတတ်တဲ့သူနဲ့ ပြိုင်ငြင်းရင် ပါးစပ် ( ၁၀) ပေါက်လောက်ပါလဲ ပြိုင်ငြင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ဆုံး ဒုက္ခရောက်ပြီး ဉာဏ်မရှိတဲ့လူက ကိုယ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်း လွှတ်ထားလိုက်တာက ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်… ဉာဏ်မရှိတဲ့သူနဲ့ ပြိုင်မငြင်းပါနဲ့…. !
အသိဉာဏျနညျးတဲ့သူနဲ့ ပွိုငျမငွငျးပါနဲ့ !
တဈခါက ရှာတဈရှာမှာ လူ ၂ယောကျ တဈနကေုနျစကားမြား ငွငျးခုနျနကွေတယျ။ တဈယောကျက ၈ x ၃ =၂၁ လို့ ပွောတယျ။
နောကျတဈယောကျက “မဟုတျဘူး မှားနတေယျ။ ၈ x ၃=၂၄ မှ အမှနျ” ဆိုပွီး စကားမြားကွတာ ရှာသူကွီးအိမျ ရောကျလာကွတယျ။
သူကွီးက ဖွဈစဉျကို နားထောငျပွီး ၂၄ လို့ပွောတဲ့သူကို ကွိမျဒဏျ ပေးခိုငျးလိုကျတယျ။ ရိုကျခံရတဲ့သူက မကမြေနပျနဲ့ သူကွီးကို ပွနျပွောတယျ။
သူမမှားဘဲနဲ့ ဘာလို့ ကွိမျဒဏျ ပေးခံရသလဲပေါ့။ သူကွီးကပွောတယျ ၈ x ၃ =၂၁ လို့ ပွောတဲ့သူနဲ့ တဈနကေုနျ ငွငျးခုနျပွီး စကားမြားနိုငျရအောငျ မငျးလောကျ အသိဉာဏျ မရှိတဲ့သူကို အပွဈမပေးရငျ ဘယျသူ့ကို အပွဈပေးရမလဲ ဆိုပွီး ပွောပာတယျ။
ကြှနျတျောတို့ ဘေးပတျဝနျးကငျြမှာလညျး ဒီလိုလူတှနေဲ့ အမွဲ တှရေ့တတျပါတယျ။
လြှာအရိုးမရှိတိုငျး ပေါကျတတျကရတှေ ပွောပွီး သူထငျရာပဲ အမွဲမှနျတယျလို့ ထငျနတေတျတဲ့သူနဲ့ ပွိုငျငွငျးရငျ ပါးစပျ ( ၁၀) ပေါကျလောကျပါလဲ ပွိုငျငွငျးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
နောကျဆုံး ဒုက်ခရောကျပွီး ဉာဏျမရှိတဲ့လူက ကိုယျဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ဒီအတိုငျး လှတျထားလိုကျတာက ပိုအဆငျပွနေိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့… ဉာဏျမရှိတဲ့သူနဲ့ ပွိုငျမငွငျးပါနဲ့…. !
กาลครั้งหนึ่ง ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีคนสองคนทะเลาะกันทั้งวัน มีคนบอกว่า 8 x3= 21
อีกคนมาที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านเถียงว่า “เปล่า ฉันผิด 8 x3= 24 จริง”
หัวหน้าฟังเหตุการณ์และสั่งให้เด็กวัย 24 ปีถูกเฆี่ยน ผู้เสียหายร้องเรียนต่อหัวหน้า
ทำไมเธอถูกเฆี่ยนตี? เถียงกับคนที่ว่า 8 x3= 21 แล้วเถียงทั้งวัน ถ้าคุณไม่ลงโทษคนที่ไม่ฉลาดเหมือนคุณ คุณจะลงโทษใคร?
ถ้าแข่งกับคนที่คิดว่าตัวเองคิดว่าถูกเสมอโดยพูดสิ่งที่งอกออกมาจากกระดูกลิ้นของเขา แล้ว 10 ปากล่ะ? คุณไม่สามารถแข่งขัน
Jangan berdebat dengan orang jahil!
Pada suatu ketika, di sebuah kampung, seharian dua orang bergaduh. Seseorang berkata 8 x3= 21.
Seorang lagi datang ke rumah ketua kampung sambil bertengkar, “Tidak, saya salah. 8 x3= 24 benar.”
Ketua itu mendengar kejadian itu dan mengarahkan lelaki berusia 24 tahun itu disebat. Mangsa mengadu kepada ketua.
Mengapa dia disebat? Dia berhujah dengan orang yang mengatakan 8 x3= 21 dan berhujah sepanjang hari Jika anda tidak menghukum orang yang tidak bijak seperti anda, siapakah yang akan anda hukum?
Kita sering melihat orang seperti itu di sekeliling kita.
Jika anda bersaing dengan seseorang yang sentiasa berfikir apa yang difikirkannya betul dengan mengatakan perkara yang tumbuh dari tulang lidahnya, bagaimana dengan 10 mulut? Anda tidak boleh bersaing.
Akhirnya, orang yang bermasalah boleh menjadi bodoh. Adalah lebih mudah untuk membiarkannya seperti sedia ada.
Jadi jangan berdebat dengan orang yang jahil!
အိမ်တိုင်းမှာ မုရိုးပင်တပင်တော့ စိုက်ထားသင့်ပါတယ်…
This Year : 58775
Total Visit : 58775
Total Hits : 334879